कहाँ–कहाँ जारी हुन सक्छ निषेधाज्ञा ? यी हुन् ५ सयभन्दा बढी संक्रमित रहेका ९ जिल्ला – Nepal Press
कहाँ–कहाँ जारी हुन सक्छ निषेधाज्ञा ? यी हुन् ५ सयभन्दा बढी संक्रमित रहेका ९ जिल्ला
२०७८ वैशाख १२ गते २१:२३
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंसहित मुलकुभरका ९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी हुनसक्ने देखिएको छ । ती जिल्लामा सक्रिय संक्रमित ५ सयभन्दा बढी छन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले आज शहरमा ५ सय र पहाडमा २ सयभन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसका आधारमा ती जिल्लामा प्रमूख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको निर्णय लिन सक्छन् । यद्यपि, मन्त्रीपरिषद वैठकले सीसीएमसीको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अहिले साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका ७७ जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १९ हजार ३ सय ८२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये ९ जिल्लामा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा संक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ५ सय २८ पुगेको छ भने दोस्रोमा बाँकेमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २ हजार ३ सय ३९ पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या ललितपुरमा १ हजार ३ सय ५१, रुपन्देहीमा १ हजार ३ सय १३, पर्सामा ६ सय ४३, भक्तपुरमा ६ सय १३, कास्की ६ सय १३, मोरङमा ५ सय ६१ र दाङमा ५ सय ५७ पुगेको छ ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १२ गते २१:२३